Chọta ụzọ nke ịgbanwere onye ahịa ahịa | Martech Zone
Tọzdee, Septemba 4, 2014 Douglas Karr
Enweghị ụkọ ụlọ ọrụ ndị chọrọ enyemaka na ntụgharị ndị ahịa. Anyị niile na-arụsi ọrụ ike na anyị na-abụkarị ndị na-emepe emepe nnukwu ngwaahịa na ọrụ, mana anyị na-ada ada n'inye ụzọ dị mma maka ndị na-abịa ahịa. Teknụzụ ahịa na-enye ngwaọrụ iji dozie ọdịiche ahụ ma zụlite ndị ahụ na-eduga nke ọma.
Na infographic a site na Nweta, ị ga-a njem na a ahịa ụzọ, n'ụzọ niile site na mmalite ya dị ka atụmanya ịghọ a ahịa otu obodo azụmahịa. Na ụzọ ị ga-ezute onye ahịa mpaghara nke na-achọ, kọntaktị, wee mechaa họrọ azụmaahịa mpaghara. Na, ị ga - ahụ etu iji usoro azụmaahịa ihe nchọta dị mma, omume kacha mma na ebe nrụọrụ weebụ, na njikwa njikwa akpaaka na-enyere azụmaahịa obodo anyị aka iru ndị ahịa ka ọ na-eme mkpebi ịzụta ya.
Ọnụ ego akwụgoro nke ukwuu maka ụlọ ọrụ iji jiri ohere ịbụ ebe ndị ahịa na-enyocha ihe ha zụtara ọzọ - ọ bụ ezie na injinị ọchụchọ, mgbasa ozi mmekọrịta, ma ọ bụ ekwentị. Enweghị ezigbo ihe kpatara ya maka azụmaahịa itinye ego na ịtụ anya nloghachi na ego ahụ. Naanị ịchọta onye ọrụ ma ọ bụ onye ọrụ teknụzụ na-enyere gị aka.
Tags: mgbasa oziakakabaredeụzọ ntụgharịahịaụzọndu nurturingMobile na Mbadamba ụrọụzọ ntụgharịkwụọ ụgwọ kwa Pịappcnkwaliteirusearch engineahịa search enginesearch engine njikarịchaA
Ebili nke Ebumnuche-Nke Azụmaahịa Nlekọta